फेसबुक बन्द भए तपाई के गर्नुहुन्छ, चलाउन्जेल यसरी चलाउनुस्, सुरक्षित रहन्छ | Rajmarga
दिन होस कि रात, कार्यालय होस कि डेस्कटप होस् वा हातमा रहेको स्मार्टफोन, फेसबुक त्यो संसार हो, जुन हाम्रो संसारको अब महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ।
घरपरिवारको तस्वीर होस कि कार्यालयसँग सम्बन्धित राम्रा नराम्रा खबर, अहिले निजी जीवनका सबै समाचार फेसबुकमा ब्रेक हुन्छन्।
यो खबर पढ्ने अधिकांश मानिस यस्तै गर्छन् होला, त्यसैले फेसबुकसँग सम्बन्धित हालैका घटना र त्यसको सम्भावित परिणामका बारेमा तपाईलाई अवश्यक जानकारी भएको हुनुपर्छ।
किनभने फेसबुकसँग सम्बन्धित एउटा समाचारले संसारको होश उडाइदिएको छ।सुन्दा यो कथा निकै जटिल छ । तर जति जटिल छ, त्योभन्दा कयौ गुना मुस्किल ल्याउने सक्ने खालको छ।
कसरी फस्यो फेसबुक ?
रिसर्च फर्म क्याम्ब्रिज एनालिटिकामाथि आरोप लागेको छ कि उसले पाँच करोड फेसबुक प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित जानकारी गलत ढंगले प्रयोग गरेको छ। यो बहस एकपटक पुनः सुरु भएको छ कि सामाजिक सञ्जाल नेटवर्कमा प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित जानकारी कसरी र कसका साथ बाँडिन्छ ।
र, फेसबुकका लागि यो सबै जानकारी वा भनौ डाटाको मुख्य स्रोत हो, किनभने यही विज्ञापन दिने संस्था कम्पनीहरुलाई फेसबुकसम्म ल्याउँछ र कमाई गराउन सक्दछ ।
तर, क्याम्ब्रिज एनालिटिकासँग सम्बन्धित घटनाले फेसबुकका विषयमा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । यहाँसम्म कि सामाजिक सञ्जालमा फेसबुक डिलेट गर्नेसम्बन्धी हैशटैग #deletefacebookपनि भाइरल बनेको छ।
फेसबुक डिलेट गर्न सुझाव
वाट्सऐपका सहसंस्थापक ब्रायन एक्टनले ट्वीटरमा फेसबुक डिलेट गर्न सुझाव दिएका छन् । फेसबुकले केही वर्ष पहिला १६ अर्ब डलर बढी रकममा वाट्सऐप किनेको थियो ।
यो कुरा त भयो स्वयम फेसबुक डिलेट गर्नु सल्लाहको कुरा, तर के सन् २०१७ को अन्तिम त्रैमासिकमा २.२ अर्ब डलर मासिक एक्टिभ युजर रहेको फेसबुक बन्द पनि हुन सक्ला ? यदि यस्तो भयो भने के होला ? समाजमा यसका कारण कति ठुलो परिवर्तन आउला ?
फेसबुकको आकारलाई हेरेर यस्तो लाग्दछ कि यो सम्भव नै छैन ।तर प्रविधिको जगतमा वस्तु यति तिब्रताका साथ परिवर्तन हुन्छ कि आज असम्भव दस्तो लाग्ने कुरा भोलि सामान्य लाग्न सक्दछ।
सीएनएनका अनुसार बढी दिन वितेको छैन, जब निश्चित इन्टरनेट कम्पनीले मिलेर पूरै संसार परिवर्तन गरेका थिए । फेसबुकले परम्परागत संचारलाई परिवर्तन गरिदियो । उबर, नेटफ्लिक्स र एयरबीएनबीजस्ता कुराले ट्याक्सी, चलचित्र हल र होटलको स्थान लियो ।
तर क्रान्ति कुनै बेला क्रान्तिकारी देखिने यो अपस्टार्ट कम्पनीहरु अब शाक्तिशाली लाग्न थालेका छन् र उनीहरु हाम्रा बारेमा धेरै कुरा जान्दछन् । जसका कारण मानिसहरुलाई समस्या भइरहेको छ।
यही कारण हो कि अब हामीले ब्लाँकचेन शब्द पटकपटक सुन्नु परिरहेको छ। अन्य कुराका साथै ब्लाकचेन टेक्नोलजी त्यो हतियार हो, जुन फेसबुकको शक्ति अन्त्य गर्न सक्दछ । बिनकोइनमा यसको झलक देखिन्छ ।
बिना बैंक र सरकारी सहयोगको डिजिटल नगद पूरै संसारमा फैलिरहेको छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने त ब्लाँकचेन मध्यस्थतालाई हटाउँछ र यो प्रविधिले कयौ उद्योगलाई सहयोग गर्न सक्दछ।
ब्लाकगीकका अनुसार डिजिटल इन्फरमेशनलाई कपी होइन, बरु वितरण गर्ने माध्यम दिने ब्लाकचेन प्रविधि नयाँ प्रकारको इन्टरनेट मेरुदण्ड हो । यसलाई सुरुवातमा बिटक्वाइनका लागि बनाइएको थियो । तर अहिले यो फर्मला अन्य मानिसका लागि पनि काममा आउन सक्ने भएको छ।
के छ ब्लाकचेनको फाइदा ?
ब्लाँकचेन भएका कयौ व्यक्ति रेकर्ड इन्फरमेशनमा कयौ कुरा इन्ट्री गराउन सक्दछन र युजर मिलेर (कम्युनिटी) यो कुराको नियन्त्रण आफ्नो हातमा राख्न सक्दछन् कि यो रेकर्डलाई कसरी प्रयोग गर्ने हो । परिवर्तन र अपडेट कसरी गर्ने हो ।
काइनडेस्कका अनुसार यसलाई सबैभन्दा सजिला तरिकाले बुझ्नका लागि विकीपेडियाको उदाहरण छ । यो वेभसाइटमा कुनै पनि एउटा पब्लिशरले त्यहाँ रहेको जानकारीमा अधिकार जमाउन सक्दैन ।
यो दुवै नै डिस्ट्रिब्युटेड नेटवर्कबाट चल्दछन् । तर विकीपेडिया वर्ल्डवाइट वेभमा बिल्ट गरिएको छ, जसमा क्लाइन्ट–सर्भर नेटवर्कको प्रयोग गरिन्छ । एकाउन्टको माध्यमबाट प्राप्त हुने परमिशनका साथ कुनै क्लाइन्ट वा युजर सेन्ट्रलाइज्ड सर्भरमा राखिएको विकीपेडियाको जानकारी परिवर्तन गर्न सक्दछ।
जब कुनै युजर विकीपेडियामा जान्छ, तब उसले विकीपेडियाको इन्ट्रीको मास्टर कपीको अपडेटेड भर्सन पाउँछ । तर डाटाबेसको कन्ट्रोल एडमिनिस्ट्रेटरसँग रहन्छ, जसले एक्सेस र परमिशन दिनेसँग सम्बन्धित निर्णय सेन्ट्रल अथोरिटीको खातामा राख्दछ ।
अब भन्नुस् फेसबुकको जस्तो कुनै साइट यस्तो बनोस जसमा मौजुद डाटाको कन्ट्रोल कुनै कम्पनीसँग होइन, बरु सबैसँग वा कम्युनिटीसँग रहे त कस्तो होला ? विकीपेडियाको डिजिटल आधार पनि त्यही सुरक्षित र सेन्ट्रलाइज्ड डाटाबेसजस्तै हुन्छ, जुन आमरुपमा सरकार वा बैंक वा विमा कम्पनीहरुले राख्दछन् । यसको कन्ट्रोल पनि सबैभन्दा माथिल्ला मानिसहरुसँग रहन्छ ।
प्रविधिले कसरी काम गर्दछ ?
कन्ट्रोलमा अपडेट, एक्सेस र साइबर आक्रमणबाट बच्ने तौरतरिका पनि समावेश हुन्छ । तर ब्लाँकचेन प्रविधिको आधारभूत रुपले अलग डिजिटल आधार हुन्छ । यो यो प्रविधिको सबैभन्दा विशेष र अलग फिचर हो ।
विकीपेडियाको मास्टर कपीमा एडिट हुन्छ र सबै युजरलाई नयाँ भर्सन देखाउँछ । ब्लाँकचेनको मामिलामा नेटवर्कमा मौजुद सबै नोड एकै निष्कषृमा पुग्छ र त्यसमध्ये हरेक स्वतन्त्र रुपले रेकर्डलाई अपडेट गर्दछन् ।
यसपछि जुन रेकर्ड सबैभन्दा बढी लोकप्रिय हुन्छ, त्यो मास्टर कपीको स्थानमा आधिकारिक रेकर्ड मानिन्छ । तर फेसबुकको परिवर्तन वा यस्ता कुनै नयाँ विकल्प आउन अझै समय लाग्नेछ ।
जबसम्म फेसबुकमा हुनुहुन्छ, बचेर रहनुस्
–फेसबुक लगइन गर्नुस र ऐप सेटिङ पेजमा जानुस् ।
–ऐप्स, वेभसाइट एन्ड ग्लगइनअन्तर्गत एडिट बटनमा क्लिक गर्नुस्।
–प्लेटफर्मलाई डिसएबल गर्नुस् ।
यसको अर्थ यो भयो कि तपाईको फेसबुक थर्ड पार्टी साइटले प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । यदि तपाईलाई यति गर्न पनि धरै लाग्छ भने ऐप प्रयोग गर्नुको साटो पर्सनल इन्फरमेशनसम्म पहुँच सीमित बनाउन सक्नु हुन्छ ।
–फेसबुकको ऐप सेटिङ पेजमा लगइन गर्नुस्।
–हरेक ती क्याटेगोरीलाई अनक्लिक गर्नुस्, जहाँसम्म तपाई कसैलाई पुग्न दिन चाहनु हुन्न। त्यसमा बायो, बर्थडे, फेमिली, रिलिजयस भ्युज समावेश छ। बीबीसी हिन्दीबाट
Previous post: फेसबुकमाथि प्रयोगकर्ताको डाटा बेचेको आरोप, फेसबुक अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो संकटमा
Next post: कांग्रेसमा देउवाविरुद्ध को-को जुटदैछन् घेराबन्दीमा ?
समृद्धिको यात्रामा प्रधानमन्त्री ओली, के वास्तविकतामा परिणत होला समृद्धि ?